Omunye kabanzi kunazo eyayisetshenziswa emiklamweni ye ukunitha angabhekwa iphethini "amazombe" hook. Isikimu, isicelo kanye nezici zayo eziyinhloko zichazwe kulesi sihloko.
Imihlobiso, esekelwe nokungeza ukunciphisa Amabha - kungcono ukukhilosha zakudala. Ukuze ukuqaliswa zabo eziphumelelayo zokuqhuba ibhizinisi akudingi okusezingeni eliphezulu kvalfikatsiya knitters, nje ngokuzimisela ngokwanele nokunakekela. Webs wenza ukuzisebenzisa zihlukile ukuthungwa akhethekile Umbala (uma sebenzisa izinto ezinemibala ehlukahlukene):
Ngokuvumelana ukuphindaphinda eziphindaphindiwe kunomthelela ukubukeka imivimbo mpo futhi enezingqimba bushelelezi - amazombe.
Imingcele phakathi imivimbo onombala ayiqondile futhi mihlobiso. Lo mphumela wenza sikwazi ukwenza ushintsho bushelelezi komunye umbala kwesinye, idinga imibala okungenani ezintathu. Futhi amakhosi ngokuvamile zisebenzisa imibala egqamile kakhulu iqabunga variegated.
Iphethini Kulula kakhulu ukuhlanganisa nabanye. Phakathi imivimbo amazombe okwakhiwe kungafaka amaphethini jumpsuit noma ezimbalwa nje imigqa amakholomu.
Isimiso ukwakha iphethini
Noma yimuphi iphethini "amazombe" ukukhilosha (Isikimu ibekwe ngezansi esibonisa lokhu) isekelwe kwalokho ezilandelanayo lokwehliswa namakholomu noma ngaphandle sc sc.
Ngenxa yokuthi phezulu esiqongweni obumbene ezimbili iluphu emoyeni, futhi hhayi ngaphakathi komgodi provyazyvayut amakholomu amabili, inani eliphelele amakholomu emgqeni ngamunye agcinwe ezingeni elifanayo.
Izinyathelo ezilandelayo zikuvumela ukuba kahle enze iphethini "amazombe" ukukhilosha (imidwebo echaza webs kanye amasampula kubonakala kukhona okwamanje).
Inombolo yokuqala uchungechunge lwezinhlamvu 24 emoyeni iluphu (VI) plus izihibe ezintathu ngoba ephakamisa. Ngaphezu kwalokho, ekuqaleni emgqeni ngamunye kufanele senze eziningi izihibe ngoba ephakamisa.
Ikholomu lokuqala ne sc (CCH) provyazyvayut ukuba 4th base iluphu obumbene 5 * CLO okwengeziwe lidlule izihibe ezimbili wathungela ngaphezulu 5SSN, 2Bn *. Incazelo kusuka * ukuze * uphindwe kuze kube sekupheleni emgqeni ngamunye.
irowu Okwesibili uqale nge 1SSN, wangiphica zinyanga CCH umugqa wangaphambilini. ngaleyo ndlela, kukhona lemali ukwengeza CLO. Khona-ke ukwenza 5SSN * 2 CCH umugqa wangaphambilini kukhona neprovyazanymi, 5SSN, 2Bn *.
Zonke ezinye zezikhulu (kanye ebusweni kanye purl) iyaphindwa ilandelana lwesithathu.
Ijezi iphethini aminyene
Esimeni samanje Lo mlando uye wabizwa iphethini "amazombe" hook, okuyinto wesifunda inikeza izinto ezincane ezintekenteke. I izimbobo akhiwa uma uchwepheshe ukunitha at esiqongweni VP futhi ivumela amakholomu agcwalise iphethini. Nokho, umklamo oyisisekelo kungenziwa ingasebenza modified.
Uma kudingekile, ungathola okuqinile ngokugcwele noma, kunalokho, openwork iphethini "amazombe" hook. Isifunda luzobandakanya nomhlobiso okuqhubekayo ngokungeza PRS provyazyvaniya 2SSN kusukela 1st sise isiqongo (VP kwisikimu enjalo ingekho). Ukuncishiswa CCH ku ayimigodi kuzokwenzeka lapho ijezi 2SSN ithiphu jikelele.
Qaphela ukuthi ukunitha obukhulu zidinga ntambo ngaphezulu. Le nqubo isetshenziswa ukwenza amajazi, izigqoko, sweaters efudumele kanye neminye imikhiqizo.
Indlela obumbene openwork iphethini
Iphethini "amazombe" hook ubukeka ethakazelisa kakhulu lapho esikhundleni elula CLO "Clumps" we 3 amakholomu.
Empeleni, isimiso salo obumba nomhlobiso uhlala ingashintshiwe, kodwa izimbobo ezinkulu futhi akucace ngaphezulu. webs ezinjalo efanelekayo womshini ehlobo igqoka, iziketi, ngenhla, izikhwama noma izinto wezangaphakathi (amakhethini, mata, imicamelo).
Mangisho ukuthi "Amazombe" kuyinto isisekelo esihle kakhulu ukunwetshwa iziketi kanye izingubo. Kungcono ezinye rads awudalelwanga nemigoqo. Lokhu engcono kwenziwa izibalo kusengaphambili ukuthola umkhiqizo usayizi okuhleliwe.
Igqoka Iphethini zezingane nomunye-ucezu ngalé
Indlela yokwenza imbali aphume izicubu
Indlela yokwakha origami "Daisy"
Indlela yokusebenzisa izincwadi ezindala? 21 diy samuntu
Hut on inkukhu imilenze ngezandla zakhe: Hack
Indlela thunga ibhulukwe ngezandla zakhe?
MRI ekukhulelweni ekuseni: incazelo nezinqubo ukuphepha kwengane kanye nezincomo
Ukuphathwa Project - Iyini? Izinzuzo nezingozi nebubi
Idatha yomuntu siqu wengane nokuvikelwa yabo. Isicelo isampula ekwelapheni idatha yengane siqu. Isiqinisekiso ukusebenza kwedatha yomuntu siqu wengane: Isibonelo Sample
Autumn nail design: ongakhetha
Ziphathe iholide Antalya
Ukuvikelwa zokuphefumula kusho. Zokuphefumula RPG-67. Iinsetjenziswa
Coat futhi Cameroon ifulege. Umlando, incazelo nokubaluleka ifulege
Rey Bredberi: Biography nemisebenzi
Hominids - Uhlaziyo oluningiliziwe lokhu ...